AbakwaNokia bathenga ii-Withings ze-170 yezigidi zeerandi | IPhone iindaba
AbakwaNokia bathenga ii-Withings ze-170 yezigidi ze-euro
Ngoku, Nokia Akusiso nesithunzi soko yayiyiyo. Malunga neshumi leminyaka eyadlulayo, inkampani yaseFinland yayilawula imakethi yokunxibelelana ngomnxeba, kodwa babengazi indlela yokuzihlaziya xa i-iOS kunye ne-Android kamva zingena kwindawo leyo. Ngeli xesha kwakufuneka bathengise icandelo labo leselula kwaMicrosoft, nangona bengenzi bhetele kwinkampani ngoku eqhutywa nguSatya Nadella, kwaye khange bakwazi ukusungula iifowuni kude kube ngo-2016.
Ngoku umhla wokugqibela owawubathintele ekuqaliseni iifowuni uphelile, kubonakala ngathi abakwaNokia bafuna ukubuyisa inxenye yomhlaba olahlekileyo kwaye namhlanje ubhengezile ukuba uza kuthenga i-Withings, Inkampani eyenza isikali esikrelekrele, izixhobo ezilanda umkhondo womsebenzi kunye nezinye iintlobo zezixhobo ezinxulumene nempilo. I-Withings yinkampani yaseFrance kwaye iNokia kuya kufuneka ihlawule i-170 yezigidi zeerandi ukuyithenga, isivumelwano sokuba, ukuba akukho siganeko singalindelekanga, siyakusayinwa phakathi kukaJulayi noSeptemba walo nyaka.
Iindibano zokujoyina iNokia emva kwehlobo
Ngaphandle kwamathandabuzo, oku kufunyanwa kuthetha ukuba inkampani yaseFinland ifuna ukubuyela emnyango wangaphambili kwintengiso ebekungafanelanga ukuba bayilahlile. Kwisifundo esifundwe kakuhle, sonke sinethemba lokubona izixhobo zeNokia ezintsha kunye nokuhamba kwazo kulindeleke ukuba zisebenzise Inkqubo yokusebenza ye-Android, into ebebeyala ukuyishiya kwixesha elidlulileyo ukuya kuthi ga ngoku ukuba "ukusebenzisa i-Android kuya kufana nokucofa ibhulukhwe" ngengqondo yaseFinland yokuba kufuneka ibengcono (kushushu) okwethutyana kodwa kubi (ice cream) ixesha elide.
Kwelinye icala, ukufunyanwa kunokuthetha ukuba iNokia iyaqwalasela intanethi yezinto, IOT ngesifinyezo sayo ngesiNgesi. I-Intanethi yezinto zezinto esiye seva ngazo zonke kodwa bambalwa ababonileyo apho ifriji okanye umatshini wokuhlamba onokuthi uqhagamshelwe kwi-Intanethi kwaye unokusetyenziswa ukude. Siza kubona ukuba inkampani yaseFinland icwangcise ntoni, kodwa ukhuphiswano luhlala lulungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » AbakwaNokia bathenga ii-Withings ze-170 yezigidi ze-euro
I-Facebook isebenza kwi-app yekhamera eya kusebenza ngokuzimeleyo
I-Apple kufuneka inyuse umthamo we-iCloud